ကျွန်တော့်အိမ်: November 2008
Quotes (အခန်း - ၂)
ချစ်ကောင်း၏ သီချင်းများ စုစည်းမှု
Comics(2) ပိုးဇာ၊ အမွှာညီအစ်မ လေးမွန် ထွေးမွန် နှင်...
ဖြန့်ဘူး ... ဖြန့်နိုင်ဘူး ..
ASK ME စားပွဲဝိုင်း (အမှတ် - ၅)
BARACK OBAMA Next President of U.S.
အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် Tea
နင် (သို့ ) ရက်စက်သူကြီး
ကြောက်စရာ AIDS ရောဂါ (၁)
ဒို့ရွာ ဒို့မြေ၊ ဒို့ရွာမြေဝယ်
ပုထိုးမြင့်မောင်း၊ ကျောင်းကြို ကျောင်းကြား
ဆွမ်းမျှ မတင်နိုင် ရှိမည်တည်း။
ထလော့မြန်မာ၊ မြန်မာ ထလော့
ဤမြေ ဤရွာ၊ ဘယ်သူ့ရွာလဲ
ရေးသားသူ Tea at 6:58 PM0တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ကျွန်တော့်ကို ဒီဆောင်းပါးလေး တစ်ချို့လူတွေ ဒီဆောင်းပါးလေး ရေးခိုင်းနေတာ ကြာလှပြီ။ အခုတလော လည်း အလုပ်တွေရှုပ် နေတာ ဘာတွေ ရှုပ်နေမှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ။ ဒီမနက်တော့ အားနေတုန်းလေး ရေးလိုက်ပါမယ် ဆိုပြီး မြန်မာပြည်က ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ အမေရိကန်မှာ စာလာဖတ်ဖို့ ဗဟုသုသ ရအောင် တဖက်တလှမ်းကနေ ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၀တန်း အမှတ်ကလည်း အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောရပါဦးမယ်။ ကျောင်းတွေက ၁၀တန်း အမှတ်တွေကိုလည်း ကြည့်ပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ကနေ ၁၀ အတွင်းဝင်တဲ့ (Whole Burma) တွေဆိုရင် ဒီက တော်တော်လေး မိုက်ပြီး ကောင်းတဲ့ ကျောင်းတွေကို ၀င်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ၁၀တန်း အမှတ် သိပ်မကောင်းလည်း အောက်က TOEFL နဲ့ SAT တွေကို သေသေချာချာ လုပ်ပြီး အမှတ်ကောင်းမယ်ဆိုရင် တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ ကျောင်းတက်တော့မယ် ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးက TOEFL ရယ်၊ SAT ရယ် ဖြစ်တယ်။ စာမေးပွဲနှစ်ခုပါ။ TOEFL ဆိုတာ Test of English as Foreign Language ပါ။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ မိခင်ဘာသာ စကား အင်္ဂလိပ်စာ မဟုတ်တဲ့ လူတွေကို အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်း စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခုပါ။ သူ့မှာ Listening, Grammar, Reading, Speaking ဆိုပြီး လေးမျိုးပါတယ်။ စစ်ဆေးတာတော့ စာရွက်နဲ့ စစ်တာရယ်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့စစ်တာရယ် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ စစ်ပေးနေပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အင်တာနက် အဆင် မပြေလို့ စာ၇ွက်ကို ပိုအားထား နေဆဲပါ။ စာရွက်နဲ့စစ်တဲ့ စာမေးပွဲတွေမှာ Speaking မပါဘူးလေ။ ပို အဆင်ပြေတာပေါ့။ TOEFL ရလဒ် တစ်ခု မရှိပဲနဲ့တော့ အမေရိကန်က ကျောင်းတွေ လက်ခံလေ့ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၁၀တန်း ပြီးသွားတာနဲ့ အဆင်သင့် ဖြစ်ဖို့ TOEFL သင်တန်းတွေ လိုက်တက်ပါ။ ရန်ကုန်မှာ စုံစမ်းလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တဲ့ TOEFL သင်တန်းကတော့ ရန်ကုန်က Y.E.S ပါ။ TOEFL ကို ၃လ ၄လ လောက် သေသေချာချာ ပြင်ဆင် ပြီးပြီဆိုရင် စာမေးပွဲဖြေဖို့ပါ အစကထဲက ကြိုတင် စာရင်း သွင်းထားပါ။ စာရင်း သွင်းပေးတဲ့ နေရာတွေ ရှိပါတယ်။ သူက အွန်လိုင်းက Credit Card နဲ့ စာရင်း သွင်းရတာမို့ မြန်မာငွေ လက်ခံပြီး စာရင်းသွင်းပေးတဲ့ လူတွေ ဆီမှာ ကြိုပြီး သွင်းထားပါ။ စာမေးပွဲဖြေရင် ရလာဒ်က တစ်လ အတွင်း ရပါတယ်။ Paper Base စာရွက်နဲ့ စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲမှာ အမှတ် ၆၀၀ ကျော်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
TOEFL Wavier - IELTS
International English Language Testing System (IELTS) လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလန်၊ သြစတေးလျ တွေမှာ သုံးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စစ်ဆေးခြင်း စာမေးပွဲ အမျိုးအစားတစ်ခုကို ဖြေချင်တယ်၊ TOEFL မဖြေချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ကျောင်းတွေ တော်တော်များများမှာ IELTS ကို TOEFL အစား လက်ခံ ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် IELTS က TOEFL ထက် ပိုခက်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အမှန်ရွေးအစား ကွက်လပ်ဖြည့်တာတွေ ပါတယ်။ ပြီးတော့ Speaking Test လည်း ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက British Concil မှာ အတန်းတွေ တက်ထားတော့ သူတို့ IELTS ပါ ဖြေရတာ လွယ်ကူတယ်။ ဒါကြောင့် TOEFL ကို ထပ်မလုပ်တော့ပဲ IELTS ပဲ ဖြေလိုက်တယ်။ ကျောင်းလျှောက်တော့လည်း တစ်ခါထဲ IELTS နဲ့ပဲ လျှောက်ကြတယ်။
ပြီးတော့ SAT (Scholastic Aptitude Test) ဒါက ဘာသာရပ်တွေ စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲပါ။ SAT-I နဲ့ SAT-II ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အမေရိကန်က ကျောင်းတွေမှာ Scholarship လိုချင်ရင် ဒီနှစ်ခုလုံး ဖြေသင့်တဲ့ စာမေးပွဲတွေပါ။ SAT-I က အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ သခ်ျာ နှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ သခ်ျာကတော့ ၁၀တန်း အခြေခံ ကောင်းကောင်းရှိထားရင် မြန်မာ ကျောင်းသား တွေ အတွက် တော်တော် လွယ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကတော့ အရမ်းကို ခက်ခဲပြီး သေချာ ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ စကားလုံးတွေ အလုံး ၃၀၀၀ လောက် ကျက်မှတ်ရပါတယ်။ သူ့ကို ပြင်ဆင် ပေးတဲ့ သင်တန်းတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် Y.E.S ကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။ SAT-II က Chemistry, Physics, Math, Biology ဆိုပြီး မြန်မာပြည်က လူတွေ အဓိက ဖြေကြတဲ့ ဘာသာရပ် လေးမျိုးရှိပါတယ်။ သူက နှစ်ခု ဖြေရင် ရပါပြီ။ ၁၀တန်း အခြေခံရှိထားရင် အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အဓိက အထဲပိုင်း အတွင်းပိုင်းကို ပိုပြီး နက်နဲတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ မေးတာဆိုတော့ သေချာ နားလည် ထားဖို့ လိုပါတယ်။ SAT-I, SAT-II, TOEFL ဒီစာမေးပွဲတွေ အားလုံးက အမှန်တစ်ခုရွေး (Multiple Choices) မေးခွန်းတွေပါ။ A B C D E ထဲက အမှန်တစ်ခုကို ရွေးပြီး ၀ိုင်းပေးရတာပါ။ SAT-I နဲ့ SAT-II ကိုတော့ ပြင်ဆင်ရင် ၆လ ကနေ ၁နှစ် အတွင်း ကြာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို စာမေးပွဲဖြေရင်လည်း တစ်ခါထဲနဲ့ အမှတ် မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ နှစ်ခါ လောက် ဖြေရင် ပို အဆင်ပြေတယ်။ စာမေးပွဲ စာရင်းသွင်းရင်လည်း အပေါ်က TOEFL လိုပဲ ရန်ကုန်မှာ သွင်းပေးတဲ့ လူတွေ ရှိပါတယ်။
SAT စာမေးပွဲတွေက Scholarship ကို အဓိက စဉ်းစားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စာမေးပွဲတွေပါ။ Full Scholar တို့ ဘာတို့ ရရင် ကိုယ့်ဘက်ကနေ တစ်ပြား တစ်ကျပ်မှ စိုက်ထည့် စရာမလိုပဲ ကျောင်းတွေက အားလုံး တာဝန်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေစရိတ် စားစရိတ် အားလုံးကို ပေးစရာ မလိုပဲ ကျောင်းလာတက်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါ ရဖို့ အတွက် SAT စာမေးပွဲတွေ TOEFL စာမေးပွဲတွေ အမှတ်တွေ သေချာ ကောင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Library & Tuition Places
ရန်ကုန်မှာ နာမည်ကြီးတာတွေက American Center၊ British Concil တွေပါ။ သွားပေးပါ။ စာတွေ ဖတ်ပါ။ လေ့လာပါ။ အသင်းဝင်ထားပါ။ အဲ့ဒီမှာ လူတွေ အားလုံးကလည်း နိုင်ငံခြား မှာ စာသွားဖတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ လူတွေပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ ရမှာပါ။ အကြံကောင်းတွေလည်း ရှိမှာပါ။ American Center မှာ စာလုပ်လို့ ရတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိတယ်။ ပစ္စည်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ပြင်ဆင်ဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သင်တန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ICE Youth ဆိုတဲ့ စာကြည့်တိုက်လည်း ရှိပါတယ်။
စာမေးပွဲတွေ တက်ဖို့ ကျူရှင်တွေ ယူတော့မယ်ဆိုရင် အကြံပေးချင်တဲ့ နေရာတွေကတော့
TOEFL - Y.E.S Learning Center, American Center
SAT-I English - Y.E.S Learning Center ဦးမြင့်အောင်
SAT-I Math, SAT-II Math - ဦးသောင်းထွတ် မဟာမြိုင်ဆေးရုံအနီး
SAT-II Physics - ဦးသိန်းဆွေ (၆လမ်း)
SAT-II Chemistry, Biology - ဒေါ်စောမြင့် မြေနီကုန်း
ဒီလို စာမေးပွဲတွေ အတွက်ကို ပြင်ဆင်နေတုန်း မှာပဲ တစ်ဖက် က ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ ကျောင်းတွေကို ရှာဖွေထားပါ။ ရန်ကုန်က ဒဂုံမြို့နယ်က American Center မှာ Member ၀င်ထားပါ။ စာကြည့်တိုက်ကို သုံးပေးပါ။ အမေရိကန်က ကျောင်းတွေ အကြောင်း စာအုပ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သေချာ ရှာဖွေလို့ ရပါတယ်။ ကျောင်းတွေကို လျှောက်ရင် ၁၀ ကျောင်း လောက် အနည်းဆုံး လျှောက်ရင် စိတ်ချရပါတယ်။ အကောင်းတွေထဲက ၃ခုလောက်၊ အလယ် အလတ် ထဲက ၃ခုလောက်၊ သိပ်မကောင်းတာတွေထဲက ၃ခုလောက်၊ အစရှိသလို သေချာ အစီအစဉ်ချပြီး လျှောက်ပေးပါ။ ကျောင်းတွေကို ရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာ သေချာ ဂရုတစိုက် ရွေးပေးပါ။ အင်တာနက် ပေါ်တက်ပြီး Google မှာ United States Undergraduate Colleges ဆိုပြီး ရိုက်ထည့် လိုက်ရင် အများကြီး တွေ့ဦးမှာပါ။ Scholarship ကို ပေးလား မပေးလား သေချာ လေ့လာပေးပါ။ အဓိက အရေးကြီးတာကတော့ ချမ်းသာတဲ့ ကျောင်းဆိုရင် ပို စိတ်ချရတယ်။ ဒါမှ Scholarship များများ ပေးနိုင်မယ်။ ကျောင်းတွေက အများအားဖြင့် Fall Semester (June) လောက်ကို တက်ဖို့ မှန်းပြီး လျှောက်တာဆိုတော့ ၂၀၁၀ June အတွက် ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ နိုဝင်ဘာ လ မှာထဲက အပြီး လျှောက်ရတယ်။ နောက်ကျလို့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ရက်တွေက ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆီချင်း အနည်းငယ်ဆီ ကွာခြားပါတယ်။
Volunteering Experience & Working Experience
ဒီလိုမျိုး အများတကာကို အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အလုပ်တွေ၊ ပိုက်ဆံမရပဲနဲ့ ကူညီပေးရတဲ့ အလုပ်တွေက ကျောင်းလျှောက်ရင် အရေးပါတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ဥပမာ - ရွာတွေ သွားပြီး ကလေးငယ်တွေကို စာတွေ သင်ပေးမယ်၊ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါလောက်ပေါ့၊ အပတ်တိုင်း သွားပေးပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်က Biology နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စာတွေ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Red Cross တို့ Save The Children တို့ အစရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်အား ပေးလို့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဆေးခန်းတွေမှာ ဆရာဝန်တွေကို ကူညီပေးပေါ့။ အမေရိကန် နိုင်ငံက ဒီလို Volunteering အလုပ်တွေကို အရမ်း အားထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ စာတော်ပြီး အမှတ်ကောင်းရမယ့် အပြင် တစ်ဖက်က ကျောင်းလက်ခံဖို့၊ Scholarship ပေးဖို့ စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလို Volunteering Experience တွေကိုလည်း ကြည့်ပါတယ်။ Working Experience ဆိုတဲ့ အလုပ် အတွေ့အကြုံကလည်း အရေးပါတယ်။ အဓိက ကိုယ့်ဖတ်မယ့် ဘာသာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ အမှန်တကယ် ကွင်းဆင်းပြီး လုပ်ထားဖို့ပါ။ ခုနက ဆေးပညာဆိုရင် ဆေးပညာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ လုပ်ထားပေါ့။ ဒီလို လုပ်အားပေးတာနဲ့ အလုပ် အတွေ့အကြုံတွေက မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ မဟုတ်ပေမယ့် အရေးတော့ ပါပါတယ်။
နောက်ဆုံး မှာချင်တာတွေ -
American Center မှာ Member ၀င်ပါ။
ကျောင်းတွေကို အစောကြီးကထဲက ကြိုရှာထားပါ။
သင်တန်းတွေ သေချာတက်ပြီး ပြင်ဆင်ထားပါ။
စာမေးပွဲတွေကို အမှတ်ကောင်းအောင် လုပ်ပါ။
တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက် သေချာ အားထုတ်ပေးပါ။
မသိရင် မေးပါ။ ဆရာတွေကို မေးပါ။ သိတဲ့လူတွေကို မေးပါ။
English Skills ကို တိုးတက်အောင် အားထုတ်ပါ။
အားလုံး မိမိတို့ရဲ့ ပညာရေးကို စနစ်တကျ မြှင့်တင်နိုင်ကြပါစေ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သိချင်တာလေးတွေ ရှိရင်လည်း ဒီမှာပဲ မေးလည်း ရပါတယ်။ latphatyay@gmail.com မှာ လာပြီး မေးလည်း ရပါတယ်။
ရေးသားသူ Tea at 1:08 PM 11 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Article, Education
မောင်ချစ်နှင့် သူ၏ ဇနီး စကားပြောနေသည်။
မောင်ချစ် ။ ငါသေသွားခဲ့ရင် မင်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုမှာလား ?
ဇနီးဖြစ်သူ ။ ဟင့်အင်း .. ကျွန်မညီမနဲ့ပဲ နေမှာ .. ဒါနဲ့ ရှင်ကော ..
ကျွန်မသေသွားရင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုမှာလား ?
မောင်ချစ် ။ ဟင့်အင်း .. ငါလဲ မင်းလိုပဲ .. မင်းညီမနဲ့ပဲနေမှာပေါ့
ရေးသားသူ Tea at 1:29 AM0တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ဆရာမက မေးတယ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို "ကျောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ လာတာလဲ" တဲ့။
ကျောင်းသား ကဖြေတယ်.. "စာသင်ဖို့ လာတာ" တဲ့။
ဆရာမက ပြန်ပြောတယ်..."မဟုတ်ဘူးတဲ့။ စာတတ်ချင်လို့ လာရတာ" တဲ့။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဖြေတယ်..."ကျောင်းတက်ဖို့ လာတာ" တဲ့။
ဘယ်သူ့ အဖြေမှန်တယ်လို့ ထင်လဲ။ ကျွန်တော်က တော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအဖြေကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဟုတ်တယ်...ကျောင်းလာတာ ကျောင်းတတ်ဖို့ လာတာ.. တခြားဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး။ စာသင်ချင်တတ်ချင်ရင် တခြားနေရာတွေသွားလို့ ရတာပဲ... ကျူရှင်တို့ ဘာတို့ ။ ကျောင်းလာမှတော့ ကျောင်းတက်ဖို့ လာတာပေါ့ :D..
ကျောင်းက ကျွန်တော်တို့ ကိုဘာတွေသင်ပေးလဲ... professions(doctors, engineers, etc...) ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံပညာတွေသင်ပေးတာပေါ့။ ပညာတတ်ရင် ထမင်းမငတ်ဖူးတဲ့။(စာပဲတတ်ရင်တော့ ထမင်း ငတ်ချင်ငတ်မှာနော်၊ ပညာတတ်မှရမှာ :D) ဟုတ်တယ်...ကိုယ်သင်ခဲ့တဲ့ ပညာက ကိုယ့်ကို ပြန်လုပ်ကျွေးမှာပဲ။ ထမင်းမငတ်ဖူးဘဲ ပြောတာ..မဆင်းရဲဖူးတို့ ၊ အောင်မြင်မယ်တို့ မပြောဘူး။ အပေါ်က ပုံကို တွေ့ တယ်မှာလား။ အဲ့ပုံကို bell-shaped curve လို့ ခေါ်တယ်လို့ ပြောကြတာပဲ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျောင်းပြီးသွားလို့ဘ၀အတွက်ရုန်းကန်တဲ့ အခါ ကျောင်းတုန်းက စာကြိုးစားတယ်..
စာတော်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေက အလယ်ပိုင်း common-cases မှာပါသွားတယ်။ သူတို့ ကအဆင်းရဲကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး။ အချမ်းသာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ အလည်အလတ်တန်းစားတွေဖြစ်လာကြတယ်။ curve ရဲ့ အစွန်းပိုင်းမှာ ရှိတဲ့လူတွေကတော့ ကျောင်းတုန်းက စာမကြိုးစား၊ ဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့သူတွေ ပေါ့။ သူတို့ ကျတော့ ဘ၀မှာ အရမ်းအောင်မြင်ပြီး အရမ်းချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်သလို၊ ဆင်းရဲပြီး ဘ၀မှာ ကျရှုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျောင်းတုန်းက စာမတော်၊စာမကြိုးစားတဲ့ သူတွေကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ဇွတ်အထင်သေးလို့ မရပါဘူး။ သူတို့ ဟာတချိန်မှာ အရမ်း အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့မိဘတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးကိုစာအရမ်းကြိုးစားခိုင်းတယ်၊ သားသမီးကလည်းစာကြိုးစားတယ်၊စာတော်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်သားသမီးကို စာကြိုးစားခိုင်းတာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ က ကိုယ့်သားသမီးကို စာမကြိုးစားတဲ့ သူတွေနဲ့ မပေါင်းခိုင်းဘူး။(သူတို့ သားသမီးတွေပျက်စီးသွားမှာဆိုးလို့ တဲ့။ ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာမကြိုးစား၊ စာမတော်တဲ့သူတိုင်း ဆိုးမိုက်ပေတေနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ မှာလည်းသူတို့ အကြောင်းနဲ့ သူတို့ ရှိပါတယ်။) ပြီးတော့ စာမတော်၊ စာမကြိုးစားတဲ့သူတွေကို အထင်လည်း သေးတတ်ကြတယ်။ အဲ့ထဲမှာ စာမတော်၊ စာမကြိုးစားတဲ့သူတွေကို မှိုချိုး မျှစ်ချိုး ပြောတာတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားကြည့်ပါ..တချိန်က ကိုယ်အထင်သေးခဲ့တဲ့သူဟာနောင်တချိန်မှာ ကျိကျိတက် အောင်မြင်နေတဲ့သူ ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်......လူ၁ယောက် စာကြိုးစားတယ်၊မကြိုးစားဘူး၊ စာတော်တယ်၊ မတော်ဘူး ကို ကြည့်ပြီး အထင်သေးအထင်ကြီးလို့ မရပါဘူး။ ဘ၀ကို ရုန်းကန် လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာ ကျောင်းတုန်း က သင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေဟာ ၀န်ထမ်းကောင်း၁ယောက်ဖြစ်စေဖို့ သင်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာတွေပါ။ လုပ်ငန်းရှင်ကောင်း၁ယောက်ဖြစ်အောင်မသင်ပေးလိုက်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျောင်းပညာဟာ ဘ၀မှ အတိုင်းအတာတခု အထိသာရေးပါအရာရောက်ပါတယ်။ လူ၁ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို လူ၁ယောက်ရဲ့ ကျောင်းပညာကို ကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ ဒါဆို ကျောင်းမတတ်တော့ဘဲ တခြား ပညာတွေ သင်ရင် ပိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့.. အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းတော့တက်ရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လူတိုင်းကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ဇွတ်အထင်မသေးဖို့ ပါ။
ကျွန်တော့် အမြင်ကျောင်းဆိုတာ ပညာတွေသင်ပေးတဲ့ အဆောက်အဦး၁ခုပါ။ ကျောင်းကနေဘာတွေမွေးထုတ်ပေးလဲဆိုရင် society ၁ ခုအတွက်လို အပ်တဲ့ proffessions တွေကို မွေးထုတ်ပေးပါတယ်။ ကျောင်းက မရှိမဖြစ်လို အပ်တဲ့ ဆောက်အဦး၁ခုပါ။ ကျောင်းမရှိတော့
ရင် society ၁ခုက balance ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းကနေထွက်တဲ့ အထဲမှာ နောင် ဘ၀မှာ ကျိကျိတက် ချမ်းသာပြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့လူတွေဟာ လူနည်းစုပါ။ ဘယ်တော့မှလဲ လူများစုမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။ ၀န်ထမ်းဟာ အမြဲတမ်း လုပ်ငန်းရှင်ထက်တော့ အရေအတွက်ပိုများနေမှာပါ။ လူတိုင်းလိုလို ၀န်ထမ်းဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က လူနည်းစုထဲမှာပါအောင်နေမှာလား။ လူများစုထဲမှာပါအောင်နေမှာလားဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ကိုပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က အေးအေးဆေးဆေး phD ယူပြီးတော့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းမယ် ဆိုရင် ကျောင်းပညာက လုံလောက်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်က အရမ်းချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျောင်းပညာ၁ခုထဲနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျောင်းစာ ၁ခုတည်းကိုပဲ အထင်မကြီးပါနဲ့ ။ အထင်လည်းမသေးပါနဲ့ ။အစွန်းမရောက်ပါနဲ့ ။ အရာအားလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ ......
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါး အား မျှဝေပေးလိုက်သည်။
ရေးသားသူ Tea at 1:16 AM 1 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ဗုဒ္ဓ၊ ယေရှုတော်နဲ့ ပိဋိကပ်တွေ၊ သမ္မာကျမ်းတွေကို
အဲဒီ သူလျှိုကြီးဟာ မှန်ကိုအကြောက်ဆုံးပဲ။
မှတ်ချက် - ဤကဗျာအား ကြိုက်နှစ်သက်မိ သဖြင့်
နီယော်ဓာဘလောခ့် မှ ကူးယူ၍ တင်ပြသည်။
ရေးသားသူ Tea at 2:55 AM 1 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ကျွန်တော် Quotes အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ စကားစု လေးတွေကို စုဆောင်းရတာ ၀ါသနာ ပါတယ်။ အရင်တစ်ခါ တုန်းကလည်း အချစ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Quotes လေးတွေကို ပိုစ့်တစ်ခု နဲ့ စုဆောင်း တင်ပြပေးဖူးတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ဘာသာပြန်ထားတဲ့ အဓိပ္ပာယ် လေးနက်တဲ့ စကားစုလေး ၁၂ခုကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ငါတို့လုပ်နေတာဟာ ငါတို့စဉ်းစားတာတွေ၊ ငါတို့သိထားတာတွေ ဟာ တကယ်တော့ သေးငယ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေတာ ပေးစွမ်း တာပါ။ တကယ်တမ်းအရေးပါတာက ငါတို့ဘာတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ရန်သူတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ရတာဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ရတာထက် ပိုလွယ်ကူတယ်။
အရည်အချင်းဆိုတာ ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခု မဟုတ်၊ အရည်အချင်းဆိုတာ အကျင့်တစ်ခု။
သင်ဘယ်နေရာမှာ ကျဆုံးခဲ့လဲ ဆိုတာ မကြည့်ပါနဲ့။ ဘယ်နေရာမှာ ခြေချော်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ပါ။
သင်၏ရန်သူ အမှားတစ်ခု လုပ်နေချိန်မှာ ဘယ်တော့မှ မနှောက်ယှက်ပါနှင့်။
အကြံဥာဏ်ဆိုတာ ငါတို့သိထားတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
"The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear." Aung San Suu Kyi
ကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတာ တစ်ခုတည်း စစ်မှန်တဲ့ အကျဉ်းထောင်တစ်ခု၊ တစ်ခုတည်း စစ်မှန်တဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ ကြောက်လန့်ခြင်း မှ လွတ်လပ်ခြင်း ဖြစ်တယ်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ အဆင်သင့် ရှိနေပြီးသား အရာတစ်ခု မဟုတ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းသည် သင်၏ ဆောင်ရွှက် ပြုမူခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ခင်မင်ခြင်း (Friendship) ဟူသည် စိတ်တစ်ခု၊ ခန္ဓာနှစ်ခု။
ငါဟာ တုံးအခြင်းနဲ့ စိတ်ရှည်တယ်။ ဒါပေမယ့် တုံးအမှုနဲ့ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ လူတွေနဲ့တော့ စိတ်မရှည်ပါ။
သင်၏ ရန်သူတွေကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေကိုတော့ မမေ့ပါနှင့်။
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former." Albert Einstein
လောကမှာ အဆုံးမရှိတာ နှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ တစ်ခုက စကြာဝဌာ။ တစ်ခုက လူတွေရဲ့ တုံးအ ခြင်း၊ ဒါပေမယ့် စကြာဝဌာကြီး အဆုံးမရှိဘူး ဆိုတာကိုတော့ ငါမသေချာဘူး။
whitecandle.05@gmail.com ကလည်း ကျွန်တော့်ကို Gtalk မှာ Quote လေးတစ်ခု ဒီနေရာမှာ သုံးဖို့ လာပြောသွားပါတယ်။
"No man really becomesafool until he stops asking questions." Charles P.Steinmetz
လူတစ်ယောက်ဟာ မေးခွန်းတွေ မေးနေတရွေ့ အရူးမဖြစ်ဘူး
ရေးသားသူ Tea at 1:58 AM6တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
လူတစ်ယောက်က ဘုရားသခင်ကို မေးလေသည်။
လူသား - ကိုယ်တော်တို့ရဲ့ တစ်မိနစ်အချိန်က ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘယ်လောက် ကြာပါသလဲ?
ဘုရားသခင် - ငါတို့ရဲ့ တစ်မိနစ်အချိန်က လူ့ပြည်မှာဆို နှစ်ပေါင်း သန်းတစ်ရာ ကြာတယ်။
လူသား - ဒါနဲ့ ကိုယ်တော်တို့ ငွေလဲနှုန်းက ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲ?
ဘုရားသခင် - ငါတို့ရဲ့ တစ်ဒေါ်လာဟာ မင်းတို့ ဆီက ငွေနဲ့ဆို သန်းတစ်ရာနဲ့ ညီမျှတယ်။
လူသား - ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်တော်တို့ရဲ့ တစ်ဒေါ်လာကို ကျွန်တော့်ကို ပေးသနားတော်မူပါလား
ဘုရားသခင် - အသင်လူသား ငါတို့အချိန်နဲ့ တစ်မိနစ်ပဲ စောင့်လိုက်ပါဦးလေ ....
ရေးသားသူ Tea at 1:08 AM2တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ရေးသားသူ Tea at 2:23 PM 1 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တစ်တပ်လုံး ပျက်လို့ 
ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့လည်း ကိုယ်ကိုတိုင် မသိရချင်...
သည်ဘ၀က သိပ်ကိုမှောင်လွန်းပါတယ် အချစ်ရယ်....
သင် မထူးခြားသလိုသာ ဆက်ဖတ်ပါ...
အုံ့ ပုန်းဆိုတဲ့ ငါဆိုတဲ့ကောင် အကြောင်းကိုလေ.....
ရေးသားသူ အိတာ at 4:49 AM7တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
Comics(2) ပိုးဇာ၊ အမွှာညီအစ်မ လေးမွန် ထွေးမွန် နှင့် ဇွတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေး
ဒီတစ်ပတ်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူပျိုကြီး အလှည့်ပေါ့။ ကာတွန်း နာမည်ကတော့ ဇွတ်အရောင်း မြှင့်တင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ လေးမွန် ထွေးမွန် ကာတွန်းက ကာတွန်းတွေထဲမှာ အရမ်းကို လူကြိုက်များတဲ့ ကာတွန်း တစ်ခုပါ။ နောက်နှစ်ပတ် ကျရင်တော့ ဘိုဘို တင်ရမလား? ဘယ်ကာတွန်းကို တင်စေချင်ပါသလဲ?
နောက်နှစ်ပတ် ကျရင်တော့ ဘိုဘို တင်ရမလား? ရွှေအိ၊ ရွှေဘွတ် လား? ပြာဂလောင် ပြာလချောင်လား? ဘယ်ကာတွန်းကို တင်စေချင်ပါသလဲ?
ရေးသားသူ Tea at 12:49 PM 18 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တန်ဆောင်တိုင် ဆိုတာ ကြားရင် ကျွန်တော်တော့ တောင်ကြီးကိုပဲ သတိရတယ်။ တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် ပွဲကို တစ်ခါသာ ရောက်ဖူး ပေမယ့် လုံးဝ မမေ့နိုင်ပါဘူး။
တစ်ချိန်က ညလုံးပေါက် မီးပုံးပျံတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တက်သွားတာကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် ... လှတယ် လှတယ် .. မိုက်တယ် မိုက်တယ် ဆိုပြီး အားလုံးနဲ့ အတူ အော်ဟစ်ပြီး မီးပုံးပျံတွေရဲ့ အလှကို ခံစားခဲ့ဖူးတယ် ... ကျွန်တော် ရောက်ခဲ့တဲ့ နှစ်က လေက အရမ်းပြင်းလွန်းတော့ မီးပုံးပျံတွေ မီးလောင်ပြီး ပျက်ကျတာ အရမ်းများတယ် ... တန်ဆောင်တိုင် အချိန် ရောက်လာပြန်တော့ "ငါအခု တောင်ကြီးမှာ ရှိနေရင် အရမ်းမိုက်မှာပဲ" ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စိတ်ဆန္ဒက ဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ် .. ဒီလိုဖြစ်တာက တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်ကို ရောက်ဖူး ကြုံဖူးတဲ့ လူတိုင်း ဖြစ်မှာ အမှန်ပဲလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ် ...
အခု မီးပုံးပျံပွဲကို တိုက်ရိုက် LIVE ပြနေပါတယ်။ အားလုံး သွားရောက် ကြည့်ရှုခံစား နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာ ကို နှိပ်ပြီး သွားရောက် ခံစား နိုင်ပါတယ်။
မီးရှုးမီးပန်းတွေကို လွမ်းတယ် ..
မီးပုံးပျံတွေကို လွမ်းတယ် ..
လှတယ် လှတယ် လို့ အော်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို လွမ်းတယ် ..
ရေးသားသူ Tea at 1:27 PM2တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
Google ရဲ့ G1 ထွက်တာလည်း တစ်လလောက် ရှိပါပြီ။ အခုထိတော့ ဘာပြဿနာ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်တော့ မကြား သေး ပါဘူး။ မထွက်ခင်က နာမည်ကြီး သလိုလိုနဲ့ အခုတော့ အသံပျောက် နေပါတယ်။ iPhone လောက်တော့ လူတွေ စိတ်မလှုပ်ရှား တာတော့ အမှန်ဘဲ။ G1 ကို ကြည့်ရတာတော့ ပုံစံ ထူးထူးခြားခြား မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွှန်တော့် မျက်စိ ထဲမှာတော့ Apple iPhone လိုမျိုး ဒီဇိုင်းလှလှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွှန်တော်တို့ တွေ့နေကျ keyboard ဖုန်း အမျိုးအစားတွေနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။
G1 ဖုန်း touch screen က ၃၂၀-၄၈၀ pixel ရှိပြီး ထိတွေ့မှု ခံစားတဲ့နေရာမှာ အရှိန်မြန်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ Menu, Home, Back, Phone Pick up ခလုတ်တွေ ကတော့ ဖုန်း၏ တဖက်ခြမ်းတွင် ရှိပြီး 3-megapixel ကင်မရာကို အနောက်ဖက်ခြမ်းတွင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဖုန်းအဖုံးကို အပေါ်ဖက်သို့ လျှောလိုက်ပါက keyboard ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ keyboard တော့ ရိုးရိုးလို့ဘဲ ပြောရပါ လိမ့်မယ်။ G1 ရဲ့ ရှေးဦးဆုံး စာမျက်နှာ Homepage ကတော့ ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းပေါ်တွင် ရှိသော application များကို ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ default setting အရဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်သော application များ အားလုံးကို လက်တစ်ချက် ထိလိုက်ရုံဖြင့် ဖွင့်နိုင်သော drawer တစ်ခု ထည့်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ menu ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါက window shade ချသော option ရွေးချယ် နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် message သစ်ရောက်ကြောင်း ကြေညာချက်များနှင့် အထွေထွေ သတိပေးချက် များကို ပိတ်ပင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းခေါ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ G1 ကိုသုံး၇တာ အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်တဲ့ အပိုင်းမှာ ကောင်းသော်လည်း screen သည် ၁၀ စက္ကန့်လောက်ကြာလျှင် ပိတ်သွား ပါတယ်။ screen ကိုပြန်ပြီး ဖွင့်လိုပါက menu ခလုတ်ကို ပြန်ပြန်နှိပ်ရပါတယ်။ ဒီဟာက လွဲလို့ G1 ကတော့ သုံးရတာ စိတ်ချရပါတယ်။ စက်ရပ်တာလို့၊ အလုပ်မလုပ်တော့တာလို့ အခြေအနေမျိုး တော်တော်ရှားပါတယ်။ G1 မှာတော့ အင်တာနက် browser အနေနဲ့ Chrome လိုမျိုး Safari နှင့် Mobile safari တို့သုံးသော Webkit open source browser engine နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့ password and logins တွေကိုလည်း desktop browsers တွေလိုမျိုး မှတ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ Google Map ကို သုံးရတာလည်း desktop မှာသုံးသလို satellite, Traffic and Street View တွေ သုံးလို့ ရပါတယ်။ GPS ဖွင့်လိုက်လျှင်လည်း အိမ်ထည်း ရောက်နေသည်အထိ လမ်းညွန် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်း တိကျတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
G1 ရဲ operating system ကတော့ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ linux လိုမျိုး open source ဖြစ်လို့ လူတိုင်း application တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝ open source ဖြစ်နေတော့လည်း hacker တွေကို နည်းနည်းတော့ လန့်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းထဲကို hack လုပ်တဲ့ application မတော်တဆ သွင်းမိရင်တော့ ရွာလည်ဖို့ သာပြင်ထားရမယ်။ နောက်ဘယ် လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြတာပေါ့။
G1 ထွက်ပြီး နောက်ပိုင်း လူတွေ မကြိုက်တဲ့ အချက်တွေကတော့ အဓိက လုပ်ဆောင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော် G1 တွင် ၃.၅ မီလီမီတာ headphone ပေါက် မရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Youtube ကလွဲပြီး တခြား video player သုံးလို့ မရပါဘူး။ ပြီးတော့ တခြား ပြသာနာတွေ ကတော့ MS exchange support မရှိခြင်း၊ desktop နဲ့ SYNC လုပ်လို့ မရခြင်း၊ VolP capabilities မရှိခြင်း၊ အင်တာနက် bandwidth အလွန်ဆုံး ၁ GB တာရခြင်း၊ Amazon မှ Download များကို WiFi မှတစ်ဆင့် လုပ်ရခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ပြသာနာကတော့ 1 GB data ကန့်သတ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ 1GB ကျော်သွားရင်တော့ G1 ၏ internet connection speed သည် 3G နှင့် EDGE speed အောက်ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး T-mobile သတ်မှတ်ထားသော speed အတိုင်းသုံး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ T-mobile ကတော့ ဒီကိစ္စကြောင့် complaint အများကြီး ရတော့ အခုနောက်ပိုင်း policy ပြောင်းဖို့တော့ လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ data ကိုတော့ စိတ်ကြိုက် သုံးရင်တော့ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုပြောပြော connection speed အလျှော့ခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ခပ်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone ကတော့ ဒီအပိုင်းမှာသာပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၃၀ ပေပြီး unlimited data သုံးလိုရပါတယ်။ Google ၏ G1 ကျတော့ တစ်လ ၂၅ ဒေါ်လာ ပေးရပြီး 1GB data သာ သုံးစွဲလို့ရပါတယ်။ နောက် အားနည်းချက် ကတော့ 3.5 mm headphone jack မရှိတာတော့ နည်းနည်း စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူမရှိတော့ G1 ကိုmusic player လိုမျိုး အဆင်ပြေပြေ မသုံး နိုင်တော့ပါဘူး။ လူတော်တော် များများ complaint တက်ကြတာ နောက်တစ်ချက်ကတော့ T-mobile carrier ကို ဖြစ်ပါတယ်။ T-mobile ရဲ့ Connection ကမကောင်းဘူးလို့ လူတော်တော်များများ ပြောနေကြပါတယ်။ T-mobile ကြောင့်မလို့လဲ 1GB data ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ချုံပြီးပြောရရင်တော့ Google G1 ဟာ iPhone နဲ့ ယှဉ်လိုလျှင် ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ပိုလှအောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ keyboard ကိုလည်း စာရိုက်ရ ပိုလွယ်အောင် လုပ်ဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့ 3rd party application တွေ ကိုလည်း apple store လိုမျိုး အမျိုးအစား ပေါင်းစုံနဲ့ customer အားလုံး စိတ်ချချ သုံးနိုင်အောင် လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ လူကြိုက်များလာပြီး apple ၏ iPhone empire ကြီးနဲ့ ယှဉ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ သိပံ္ပမောင်ပိန် at 4:36 PM4တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ဒါက အရင်အပတ်ကအကြွေး။ လင်းစစ်သူတို့ခင်မျာ အကြွေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းလို့ ညှပ်သေတော့မယ်။ စာဖတ်သူတွေ ခွင့်လွှတ်သီးခံနိုင်ပါစေဗျာ။ ကဲ… ဆစ်ဒ်နီ အော်ပရာ ကဇာတ်ရုံအကြောင်း ဆက်ရအောင်ဗျာ။ ပထမ ပိုင်းမဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေ အတွက် ဒီ လင့် ကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ကြောင်းပါ။ ဒုတိယပိုင်းဆက်ပါပြီ။
ပရောဂျက် ပထမအဆင့် မှာတော့ Utzon က တခြား ဒီဇိုင်း အသင်း နဲ့ အလုပ်ရှင် နဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမယ့် ပရောဂျက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာမှာ သိလာတဲ့ အချက်က အသံစနစ်၊ ဖျော်ဖြေရေး နေရာ နဲ့ အခြားနေရာတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြိုင်ပွဲဝင် လိုအပ်ချက်တွေ မလုံလောက်တာ တွေ့ရှိရပြီး အလုပ်ရှင်ကလည်း ကုန်ကျစရိတ်တွေ ဆောက်လုပ်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သဘောမကျဖြစ်နေပါတယ်။ အလုပ်ရှင်နဲ့ ဒီဇိုင်းအသင်းကြား ဆက်ဆံရေးဟာ ဆောက်လုပ်ရေး အချိန်ကို ဒီဇိုင်း ပြီးပြီး မပြီးပြီး အစောဆုံးစတင်ဖို့ လုပ်ငန်းရှင်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာ ပိုမိုတင်းမာလာပါတယ်။
အလုပ်ရှင်၊ ဗိသုကပညာရှင်၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ နဲ့ ကွန်ထရက်တာတွေ အကြား တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုမိုတင်းမာလာတယ်။ Utzon က အလုပ်ရှင်ဟာ ရှိရှိသမျှ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ဒီဇိုင်း အချက်အလက်တွေအားလုံး သူ့ ဒီဇိုင်း အသင်းတစ်ခုထဲမှ တစ်ဆင့် ရယူသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ရှင်က ဗိသုကာ၊ ကွန်ထရက်တာ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ အားလုံး သူ့ ဟာသူ ပြန်လည် တိုက်ရိုက်တင်ပြဖို့ လိုလားတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာ အသင်း Arup ကနေ အလုပ်ရှင်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ အကြောင်းကဖန်လာတယ်။ Peter Murray ပြောကြားချက်အရ Utzon သြစတြေးလျကို ပြောင်းလာပြီးနောက် သူ့ ရုံးကို သုံးလလောက်ပိတ်ထားပြီး ခရီးသွားနေတယ်။ Arups က သူ့ကို ဆက်သွယ်လို့ မရတဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ချို့ဒီဇိုင်း ရွေးချယ်မှုတွေကို Utzon မပါပဲလုပ်လိုက်ရတယ်။ ဒါက Utzon နဲ့ သူ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ ဆက်ဆံရေးကို သိသိသာသာ သက်ရောက်သွားစေတယ်။
Utzon က အလုပ်ရှင်ရဲ့ Sydney Opera House Executive Committee ဝေဖန်ချက်တွေ မေးခွန်းတွေလည်း ဖြေဆိုဖို့ တွန့်ဆုတ်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Utzon က ကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့ မူလ ပြိုင်ပွဲဝင် အကဲဖြတ်ဒိုင်Professor Harry Ingham Ashworth ရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုတော့ အပြည့်အ၀ရခဲ့ ပါတယ်။ သို့သော် Utzon ရဲ့ ခေါင်းမာမှု အလျော့မပေးနိုင်မှုတွေကြောင့် အလုပ်ရှင်တောင်းဆိုတဲ့ တစ်ချို့သော ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်မှုတွေကို မလုပ်ပေးခဲ့ပါဘူး။ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ Jack Zunz ကို Utzon ပြောခဲ့ဖူးတာက သူ ဘယ်လောက်ကုန်ကုန် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ် သူလိုချင်တာ ဒါဆိုဒါပဲ ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ တော်တော် ခေါင်းမာတဲ့ လူကြီးပါလားနော်။
Utzon ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ Ove Arup ကတောင် Utzon ဟာ သူအလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့သမျှ ဗိသုကာပညာရှင်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့နှစ်တွေတောက်လျှောက် ဆက်ဆံရေးတွေဟာ ပိုလို့သာ ဆိုးလာပါတယ်။ Utzon က Minister of Public Work ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း ပုံတွေ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကြည့်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ နောက် Utzon ရဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း အငြင်းအခုံဖြစ်ကြပြီး အခကြေးငွေလည်း မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ Arup အင်ဂျင်နီယာ အသင်းက ကြားနေ ဖြန်ဖြေ ပေးပြီး ပြန်လှယ်သင့်မြတ်ရေး အတွက် ဆောက်ရွက်ရပါတော့တယ်။
၁၉၆၅ မေ မှာ Davis Hughes က Public Works ဌာနရဲ့ ၀န်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ အောက်တိုဘာမှာ Utzon က အဆင့် ၃ အတွက် သူ့လုပ်ငန်းစဉ် တွေရဲ့ အချိန်စာရင်းတွေကို တင်ပြပါတယ်။ နောက်တော့လည်း ပြဿနာဆက်ဖြစ်ပြီး Utzon က Hughes ကို ခင်ဗျားဒါမလုပ်ရင် ကျွန်တော်နုတ်ထွက်တယ် လို့ ပြောတော့ Hughes ကလည်း ခင်ဗျားနုတ်ထွက်စာကို ကျုပ်လက်ခံတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှုတ်ဆက်ပါတယ် ဆိုပြီး ပြီးသွားရော။ ဟော ပြတ်သားလိုက်ကြတာ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၆၆မှာ Utzon နုတ်ထွက်သွားတယ်။ Utzon နုတ်ထွက်စာတင်ပြီးနောက် သြစတြေးလျ ဗိသုကာပညာရှင် Harry Seidler နှင့် စာရေးဆရာ Patrick White တို့ဦးဆောင်ပြီး Utzon ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်ဖို့ ဆစ်ဒ်နီလမ်းမပေါ်မှာ ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက လက်မခံတဲ့အတွက် Utzon ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့အတူ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ masterpiece ကိုကြည့်ဖို့တောင် လုံးဝပြန်မလာခဲ့ပါဘူး။ မတ်လမှာတော့ Hughes က ပြန်ပြီးတော့ အရင်ထက် အဆင့်နိမ့်တဲ့ ကြီးကြပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ဒီဇိုင်း ဗိသုကာအကြံပေး အဖြစ်နဲ့ တစ်ခြား ဗိသုကာချုပ်တွေရဲ့ အောက်မှာ လုပ်ဖို့ ခေါ်ပေမယ့် Utzon က ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကြောင့် ပြဿနာ တက်ရလည်း ဆိုတာကတော့ ဘောလီဘောပုတ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒီဇိုင်းအတွက် Utzon ကို အပြည့်အ၀ credit ပေးထားပါတယ်။
မကြာသေးမီကတော့ အတွင်းပိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံတဲ့ အစီအစဉ်မှာ Utzon က အရောင်မျိုးစုံနဲ့ ထူပြောလှတဲ့ဒီဇိုင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အခုချိန်မှာ အသက် ၈၀ ကျော်ရှိနေပြီ။ သူ့ရဲ့သား Jan ကတော့ ယခုဒီဇိုင်း အသင်းရဲ့ အပိုင်းတစ်ခုမှာ Utzon ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Utzon Architects က ဆစ်ဒ်နီ ကဇာတ်ရုံ အသင်းနဲ့ သဘောတူညီချက်ရပြီး အနာဂတ်မှာ ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေ နဲ့ ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခွင့်ရသွားပါတယ်။
ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲက တစ်ချက်ကတော့ ဒီဇိုင်း ဥပဒေသတွေကို စာတမ်းပြုစုထားဖို့ပဲ။ ဒီစာတမ်းက ဖတ်ရှုသူကို အဆောက်အအုံထဲ အတွင်းကျကျ ခေါ်ဆောင်သွားသလိုမျိုး နောက်ကွယ်မှာ ရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး နောက်ဆုံး ဘယ်လို ရလဒ်တွေရခဲ့လဲဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်း ဥပဒေသ တွေကို ရှင်းလင်းပြထားမှာပါ။ နောက်ပြီး ဒီစာတမ်းက နောင်လာနောက်သားတွေ အတွက် အဆောက်အအုံ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လမ်းညွှန်စာတမ်းတစ်အုပ် အနေနဲ့ ကိုးကားနိုင်ဖို့ရန် အတွက်ပါ။ Utzon က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အအုံ ဟာ အနုပညာအတွက် အမြဲတိုးတက်ပြောင်းလဲ အသက်ဝင်နေတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်စေဖို့ သူမျှော်ကိုးပါတယ်။ နောင်လာနောက်သားတွေလဲ ဒီအဆောက်အအုံ ကို ခေတ်နဲ့အညီ အသုံးချနိုင်ဖို့ရာ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ လွတ်လပ်မှုအပြည့် ရှိသင့်ပါတယ် လို့ ပြောသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့အနေနဲ့ ဆစ်ဒ်နီ ကဇာတ်ရုံဟာ တူရိယာပစ္စည်းတစ်ခုလိုပါပဲတဲ့။ အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆင့်အမြှင့်ဆုံး ဖျော်ဖြေနိုင်ဖို့ရာ အချိန်နဲ့အမျှ အသံညှိပေးရမယ်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ လုပ်ပေးရမယ်တဲ့။
ဆစ်ဒ်နီ ကဇာတ်ရုံ ကို ဘုရင်မ အဲလစ်ဇ်ဘတ် ၂ က အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၁၉၇၃ မှာ ဖွင့်လစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ Utzon က the Royal Institute of Architects Australia ရဲ့ ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ချီးမြှင့်ခံရပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ဖွင့်ပွဲကိုတောင် မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ ဆစ်ဒ်နီ ကဇာတ်ရုံရဲ့ အနှစ် ၃၀ပြည့် မွေးနေ့မှာပဲ Jorn Utzon ဟာ ဗိသုကာလောကရဲ့ အမြှင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ ပရစ်ဇ်ကာ ဗိသုကာဆုကို ချီမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Utzon ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေရေးအတွင်းပိုင်းကို စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၄ မှာ ဖွင့်လှစ်ပြီး Utzon ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ Utzon Room လို့ မှည့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ယခုလိုနာမည် ပေးတာကို လက်ခံနိုင်ပါသလားလို့ မေးတော့ သူက ယခုလို ဂုဏ်ပြုတာဟာ သူ့ဘ၀မှာ ဒီထက် ကြီးကျယ်တဲ့ ဂုဏ်ပြုခံရခြင်းမျိုး မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူရခဲ့သမျှ ဘယ်လို ဆုတံဆိပ်မျိုးထက်မဆို သာပါတယ်တဲ့။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ဘုရင်မ အဲလစ်ဇ်ဘတ် ၂ က ပဲ Utzon ဆွဲတဲ့ အတွင်း ဒီဇိုင်း ခန်းမတွေကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါပြီး visionary architect အဖြစ် Utzon ကိုချီးမြှောက်ပေမယ့် သူ့သားသာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့သားက အဖေက အရမ်းအိုနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သြစတြေးလျကို လာဖို့ လေယာဉ် အကြာကြီးမစီးနိုင်တော့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်က ဒီအဆောက်အအုံထဲမှာ နေထိုင်ပြီး ရှင်သန်ဆဲပါ၊ ကဇာတ်ရုံ ဖန်တီးသူမို့ သူမျက်စိမှိတ်ပြီး မျှော်မှန်းကြည့်ရုံပါပဲ ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်။
ဒီနာမည်ကျော် အော်ပရာ ကဇာတ်ရုံ ဟာ တကယ်တော့ performance အခန်းအများကြီး စုပေါင်းပြီး အဖြူရောင် ကျောက်ပြားကပ် ရွက်ပုံစံ ကွန်ကရစ် အမိုးခုံးအောက်မှာ စုပေါင်းထားတဲ့ အဆောက်အအုံ တစ်ခုပါပဲ။ Bennelong Point မှာ ၀င့်ဝင့်ထယ်ထယ်နဲ့ သြစတြေးလျရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ UNESCO ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီက ဒီ ဆစ်ဒ်နီ ကဇာတ်ရုံကို ဘယ်သူမှငြင်းမရနိုင်သော ၂၀ရာစုရဲ့ masterpiece တွေထဲက တစ်ခုအနေနဲ့သာမက လူသားအားလုံးရဲ့ သမိုင်းထဲက masterpiece ပါလို့ Expert evaluation report က မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
ကဲ… ဗိသုကာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်လည်း အခွင့်ကြုံရင် သွားလည်ပြီး လေ့လာကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ လက်မှတ်နဲ့ ကပွဲ အစီအစဉ်တွေကို www.sydneyoperahouse.com မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကပွဲ ပြဇာတ်တွေ မကြည့်ချင်လည်း ရတယ်ထင်ပါတယ်။ Opera House Tour ရှိပါတယ်။ သြစတြေးလျက စာဖတ်ပရိသတ်များရှိရင် သွားလည်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ လည်ပြီးရင် ဒါမှမဟုတ် လည်ဖူးရင် ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေမျှသွားပါအုံးဗျာ။ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Lin Sit Thu at 2:38 PM5တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်